Dhacdo xanuun badan: Nin 18 qof oo ehelkiisa ah mar qura ku waayay duqeyn diyaaradeed + Sawirro. - Caasimada Online
Home Warar Dhacdo xanuun badan: Nin 18 qof oo ehelkiisa ah mar qura ku...
Dhacdo xanuun badan: Nin 18 qof oo ehelkiisa ah mar qura ku waayay duqeyn diyaaradeed + Sawirro.
Isaga oo ku hadlaya cod degan ayaa Sheikh Maxamed Farduun, waxa uu liis ku qoray magacyada 18 ka mid ah ehelkiisa, oo uu sheegay inay habeenkii khamiista ku geeriyoodeen weerar diiyaaradda dagaal ee MiG ee ciidanka cirka Syria ay ka fuliyeen magaalada waqoooyi ee Maaret al-Numaan.
“Fatma Assam Hajj Khamis, Abdel Aziz Hajj Khamis, Abu Abdel Azziz Hajj Khamis, Hassan Hajj Khamis,” ayuu tiriyay magacyadooda kadibna wuu joojiyay oohin darteed, oo wuu dhameyn kari waayay.
Waxa uu yiri “mar alle markii aan maqalnay dhowaqa duqeynta diyaaradda, wxaana u cararay dhinaca waddada, waxaana arkay gurugii eedadey oo gabi ahaanba dhulka lala simay, dadkii ku jirayna ay ku naf baxeen”.
Intaa kadib waxa uu u sheegay weriye ka tirsanaa CNN oo uu wareysi siinayay “Kulama hadli karo intan ka badan, waxaan hayaa dhammaan magacyada ehelkeyga, waana aqbalayaa qadarta Allah”
Weerarkaas ayaa waxaa ku naf waayay guud ahaan 25 qof, oo 15 ka mid ahaa jirkooda uu gubtay, illaa laga aqoonsan waayo.
In ka badan toddobaad ayaa magaalada Maaret al-Numaan waxa ay ahayd xudunta dagaalada u dhaxeeya ciidamada Syria iyo kuwa macaaradka ah.
Weerarka ayaa yimid isla maalintii kooxda dhaqaaqa caalamiga ah ee Avaaz ay sheegtay in ciidamada Syria ay 19 bilood ee na dhaafay ay afduubteen kadibna ay dileen 28 kun oo ahaa shacab iyo dad ehello la ah kooxaha mucaaradka.
Halkan ka arag Sawirrada dagaalka Syria.